Nyaya dzaThomas Stern pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Thomas akasimba
Thomas Stern ndiye mukuru mutevedzeri wemutungamiriri wevatengi masevhisi ku ZOG Dhijitari, akahwina mibairo mizhinji yemakambani edhijitari kubva kuGannett Co Inc., inhengo yedare reSevhisi Yekushambadzira Professional Sangano (SEMPO) Arizona, uye ine zvitupa zvakawanda zveGoogle. Stern ane BA muStrategic Communications kubva kuYunivhesiti yeKansas, uye ane Chitupa cheMasters muInternet Kushambadzira kubva kuYunivhesiti yeSan Francisco. Munguva yake yekusununguka, Stern anofarira kukwira makwikwi, kuchovha bhasikoro uye kufamba.
China, Gumiguru 11, 2012 Chitatu, October 10, 2012 Thomas akasimba
Kushambadzira kutsigira kunopa kukosha kwakakosha kupfuura kwekuonekwa kwechiratidzo uye traffic traffic. Vatengesi vane hunyanzvi nhasi vari kutsvaga kuwana zvakanakisa kubva kutsigiro, uye imwe nzira yekuita kudaro kushandisa mabhenefiti ekutsvagisa injini. Kuti uvandudze rutsigiro rwekushambadzira neSEO, unofanirwa kuona mhando dzakasiyana dzekutsigira dziripo uye nzira dzakakosha dzinodiwa pakuongorora kukosha kweSEO. Tsika Midhiya - Dhinda, TV, Rutsigiro Rutsigiro kuburikidza neyakajairwa midhiya anowanzo kuuya